Firmino oo sugi la’a rikoor cajiib ah uu ka sameeyn doono kulanka caawa dhex mari doono kooxaha Napoli iyo Liverpool – Gool FM
(Napoli) 17 Sebt 2019. Liverpool ayaa caawa ku wajihi doonta kooxda Napoli Stadio Olimpico kulankeeda ugu horeeya tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2019/2020, halkaasoo ay ka bilaabayso difaacashadeeda Koobkan.
Isku aadkii heerka Group-yada tartanka Champions League ee lagu sameeyey Magaalada Monaco ee dalka Faransiiska bishii lasoo dhaafa ayeey Liverpool kaga beegantay Group E waxaana ku wehliya kooxaha Napoli, RB Salzburg iyo Genk.
Haddaba shabakada rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa waxay tilmaamtay in kulanka caawa uu xambaarsan yahay rikoor cajiib ah ee la filayo inuu sameeyo weeraryahanka reer Brazil iyo naadiga Reds ee Roberto Firmino.
Roberto Firmino, oo 27 jir ah, ayaa kaga soo biiray kooxda Liverpool dhigeeda Hoffenheim aduun lacageed dhan 41 milyan oo euro sannadkii 2015.
Haddaba shabakada rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa waxay sheegtay in Roberto Firmino uu ciyaari doono kulankiisii 200-aad ee Reds, ciyaarta ay caawa ku booqan doonaan Napoli Stadio Olimpico, tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda ku ciyaarta garoonka Anfield.
Si kastaba ha noqotee, Roberto Firmino ayaa u dhaliyay 68 gool, isagoo sidoo kale caawiyay 51 gool kale, kaddib 199 kulan uu u saftay kooxda reer England ee Liverpool.